samedi, 20 février 2016 22:28
Fiarahamonina : Zaza menavava 3 volana narian’ny Reniny
Zazalahy kely, 3 volana, antsoina hoe Sandrico no narian-dreniny niteraka azy tany anaty bozaka, tao Tsararivotra Sambava, androany sabotsy 20 febroary 2016, manodidina ny mitatao vovonana. Ramatoa sendra nandalo no naheno feon-jaza mitomany ka nandeha nijery, ary tamin’izay no nahitany an’ity zazakely.
samedi, 20 février 2016 22:21
Farafangana : Dimy volana tsy nahita TVM
Efa ho dimy volana izao ny mponin'i Farafangana no tsy nahita ny fandaharan'ny Televiziona Malagasy (TVM). Tsy fahasimbana fitaovana fa ny tanjaky ny herinaratra no ambany satria any amin’ny 160 Volts fotsiny. Ny « émetteur » ny fahitalavitra ihany koa efa somary antitra.
Photo: Archives net
Fiaraha-monina : Katsaka manta namonoana olona
Tonga naka katsaka teny an-tanimboly ity ramatoa iray, mba ho an-janany. Nosakanana lehilahy iray, izay sakaizany ihany, izy mba tsy haka katsaka. Nikiry anefa rahavehivavy ary nilaza fa tsy azonao sakanana amin’ity aho fa izaho koa mba namboly azy ity niaraka tamin’ny vadinao.